२५ असार, २०७७ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1365
रामकुमारकी श्रीमती लक्ष्मी आज बिहान देखि नै फर्याक फुरुक गर्दै थिइन् । आज छोराको Birthday बेलुका पाहुनाहरुलाई Dinner मा बोलाको छ। भ्याई नभ्याई छ उनलाई Birthday को तयारी अनि पाहुना को सत्कार गर्न। Cake अर्डर गरेको दुइ दिन अगाडी नै तर अहिलेसम्म नआइपुग्दा फतफताउदै थिइन् Poor Service भनेर। अर्को वर्ष त त्यो Shop बाट Order नगर्ने रे। पाहुनालाई खुवाउने परिकारको तयारीमा रामकुमार पनि आफ्नी श्रीमतीलाई सहयोग गरि रहेको थियो। "पाहुना राख्ने कोठा सिगार्न पर्यो नि बुढा कति भान्छामा बसीराको" श्रीमतीले अर्कै काम अरहाइन राम कुमारलाई । "एउटा ठाउमा बसेको देख्नै सक्दिन यो बुढी" कराउदै उठ्यो राम कुमार।
दुइवर्ष अगाडी राम कुमारलाई पनि अफिसबाट अमेरिका जाने चान्स मिलेको थियो। आफ्नी श्रीमती र छोरो सहित ठ्याक्कै दश महिना बिताएको थियो उसले अमेरिका मा। त्यहि बाट Birthday सिलसिला सुरु भएको जानिफकारहरु बताउछन्।
नाम रामकुमार भएपनि Rocky भनेर बोलाउछन् सहपाठीहरुले आजभोली उसलाई। उता लक्ष्मी पनि Lucky भा कि छे। छोरालाई पनि मिल्ने नाम दिएका छन् - Vicky। आफ्नो नेपाली परिवारलाई अमेरिकीकरण गरेका बुढाबुढी बडो प्रसन्न देखिन्छन अनि आधुनिक पनि। गाउबाट काठमाडौँ आउदाको अवस्था छिमेकीहरुले राम्रै सम्झनछन् तर आधुनिकता को चस्मा पहिरेका यी बुढा बुढीले बिर्सी सकेको भान हुन्थ्यो। बेला न कुबेला आउने Lucky का गुनासाहरुले छिमेकीहरु रोमान्चित हुन्थे "हेर्नुस न मैले त सारी, धोति लाउनै बिर्से भन्या। सधै Easy Clothes लगाई रहने Habit भएर हो कि।"
Vicky को अंग्रेजी प्रतिको चाहना उनीहरुलाई औधि मन पर्छ। उ English मेडियमको स्कूलमा पढ्छ। छोराले बाबा र आमाको सट्टा Dad र Mom भनेको खुब मन पराउछन् Rocky र Lucky दुवै। गर्वित हुन्छन उनीहरु छोराको प्रगति मा। Vicky आज निकै excited छ। किन नहोस त, आज उसको Birthday, एउटा विशेष दिन उसका लागि। Dad र Mom लाई सोध्दै थियो "Where is my birthday gift?"
"छोराले के सोध्दै छ? कहिलेकाही त्यसले बोलेको नै बुझ्दिन म" Lucky ले आफ्नो कमजोर अंग्रेजीको उदाहरण प्रस्तुत गर्छे प्राय। रामकुमार आफ्नी श्रीमतीलाई अंग्रेजी सिक भनेर थाकिसक्यो। उनि सिक्न खोज्छिन तर सक्दिनन। उनीलाई विशेष आफ्ना संगीनिहरुसित अमेरिकाको कुरा गरेर समय बिताउन बढी मन पर्छ। दश महिनाको समयाबधि तर दश बर्षको भान हुन्छ। संगीनिहरु सहि थाप्छन "जमाना कहाँ बाट कहाँ पुगी सक्यो हामी चाही कति भान्छा मा थन्किनु अनि कति सासुको बुहार्तन सहनु।"
"Happy Birthday" भन्दै पाहुनाहरु भित्रिए Rocky को घरमा। Lucky ले पाहुनालाई ड्रिङ्क्स को साथमा starter serve गरिन। कतिलाई पिउन बहाना चाहिन्छ भन्ने कथन प्रमाणित हुँदै थियो। त्यो माहोल (आधुनिकीकरण या भनौ अमेरिकीकरण) मा दुवै बुढाबुढी रमिरहेका थिए। लाग्थ्यो उनीहरुले नेपाली पहिचान बिर्सी सकेछन।
पाहुनाको हुलमा रहेका जेठाबालाई अझ पनि ताजैछ लक्ष्मीले आफ्नो छोरोलाई मन्दिरमा लगेर अस्ट चिरन्जिबीको पूजा गरेको उसको जन्म दिनमा। दुइ वर्ष मात्र त भयो सिनेमा घरमा देखाइने कुनै चलचित्र झैँ उनीहरुको हाउभाउ र दैनिकी परिबर्तन भएको। जेठाबा दुबिधामा पर्छन प्राय यिनीहरुलाई देखेर - रामकुमार र लक्ष्मी हुन् वा Rocky र Lucky।
खानपानको सिलसिला सकिएपछि नाच गान सुरु भयो। अधिक पेयपदार्थको सेवनले अर्ध चेतनामा रहेकाहरुले के गाए अनि के नाचे बुझ्नै गारो भैरहेको थियो। कुनामा रहेका जेठाबा खैजडी र मादलुको तालमा नाचेको मारुनी सम्झिदै अगाडिको आधुनिक उत्छ्रिन्कला लाई झेल्दै थिए जसो तसो।
आधुनिकीकरणको नाममा आफ्नो मौलिकता अनि संस्कृति धुजा धुजा भएको देख्दा विवस जेठाबाको मन रोइरहेको पाहुनाले भरि भराउ कोठामा कसैले देखेन।